Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Sandals Foundation oo Dhiirigelinaya Rajo Cusub oo Jamaica ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Aasaaska Sandals Rajo Dhiirigelinaya
Mu'asasada Sandals waxay aaminsan tahay in ficilka rajadu uu yahay xoog dhaqaajin kara buuraha. Rajadu, qaabka ugu fudud, waxay dhiirigelin kartaa ficil iyo awood waxayna si togan u bedeli kartaa caqliga iyo dareenka.
Aasaaska waa urur aan faa'iido doon ahayn oo la bilaabay Maarso 2009 si ay u caawiyaan Sandals Resorts International inay sii wadaan inay isbeddel ku sameeyaan Kariibiyaanka.
Dhammaan kharashyada la xidhiidha maamulka iyo maaraynta waxa taageera Sandals International.
100% dollar kasta oo lagu deeqo wuxuu si toos ah ugu socdaa maalgelinta waxqabadyada waxtarka leh ee waxtarka leh ee dhinacyada muhiimka ah ee waxbarashada, bulshada iyo deegaanka.
Waxaa jira mashaariic Sandals Foundation oo dhan jasiiradaha halkaas oo kabahaaga ku taal. Maanta, waxaan diiradda saareynaa waxa rajada ka dhalisay Jamaica.
Sanduuqa Sandals waxay fulisay oo ay taageertay mashaariic iyo hindise taageeraya horumarinta bulshooyinka deegaanka, kobcinta barnaamijyada waxbarashada iyo ilaalinta deegaanka gudaha Jamaica.
Xarunta Nabadda & Cadaalada ee Flanker
Mu'asasada Sandals waxay ka shaqeysaa bulshada gudaha ee Flanker iyada oo leh ku dhawaad ​​300 oo arday oo isticmaala Xarunta Caddaaladda bil kasta. Barnaamijka Daryeelka Dugsiga Kadib iyo Taageerada Dheeraadka ah (ACES) waxaa soo bandhigay Sandals Foundation si loo hubiyo jawi nabdoon, habaysan oo dhalinyarada khatarta ku jirta ee bulshada ka tirsan ay ka faa'iidaysan karaan la-talin iyo hagitaan u go'an, taageero la hagayo ee shaqadooda dugsiga iyo hawlahooda, iyo ka qaybgalka hawlaha galabnimo ee la kormeero kuwaas oo dhiirigeliya hab-dhaqan bulsho oo togan.
Sandals/Flanker Tababarka iyo Tierka Shaqaalaysiinta ayaa bixiyay shaqooyin iyo deeqo waxbarasho, marti galiyay bandhigyo caafimaad, iyo kor u qaadida akhris-qoraalka.
Qaabka Wanaagsan ee Ilkaha & Barnaamijka Daryeelka Indhaha
Sannad kasta liiska mutadawiciinta waxaa ka mid ah dhakhaatiirta indhaha, dhakhaatiirta indhaha, dhakhaatiirta indhaha, farsamoyaqaannada indhaha, kalkaaliyayaasha caafimaadka, iyo tabaruceyaasha daryeelka aan indhaha ahayn ee ka socda Maraykanka iyo Kanada si ay uga qaybqaataan rugta caafimaadka ee toddobaadka ah ee suurtogalka ah iyada oo la kaashanayo Sandals Foundation iyo kuwa kale ee degaanka. wada-hawlgalayaasha.
iCARE waxa ay sidoo kale la kaashatay Cisbitaalka Gobolka Cornwall si ay ugu qabato ilaa 50 qalliin oo indhaha indhaha ah oo bilaash ah kuwa aadka ugu baahan.
Si wada jir ah, Barnaamijyada Daryeelka Ilkaha iyo Qaababka Weyn ayaa saameeyay in ka badan 150,000 oo qof oo ku nool Jamaica.
Sandals Foundation oo kaashanaysa Wasaaradda Beeraha iyo Kalluumeysiga, waxay si buuxda u shaqeysaa oo maamushaa laba goobood oo badda lagu xanaaneeyo oo ku yaal Jamaica - Boscobel iyo Whitehouse Marine Sanctuary.
Goobaha badweynta ayaa gacan ka geysta hagaajinta kaydka kalluunka ee hoos u dhaca kalluumeysiga Jamaica, iyo sidoo kale in la baro qiimaha ilaalinta nolosha badda iyo hab-nololeedyada kalluumaysatada maxalliga ah.
Xarunta Sanctuary ee Boscobel waxa ay si buuxda u shaqaynaysay ilaa bishii Maajo 2013 iyada oo ay korodhay 333% baayoomasska kalluunku 2015. Xarunta Badbaadinta Marinka ee Whitehouse waxa ay si buuxda u shaqaynaysay ilaa May 2015.
Mashruucani si uu u ahaado mid waara, Sandals Foundation waxa ay u biloowday dhawr olole waxbarasho oo loogu talagalay booqdayaasha, xubnaha kooxda, iyo carruurta dugsiga si ay u fahmaan muhiimada ilaalinta qoolleyda iyo doorka qof kastaa ka ciyaaro. Intaa waxaa dheer, xubnaha kooxda ayaa sidoo kale la baray waxa ay tahay inay sameeyaan marka qoolleyda ay ukun ku dhigaan mid ka mid ah guryaha Sandals ama Beaches Resorts.
Martida ku sugan aagga Ocho Rios waxay ka qaybqaadan karaan socdaalka turtle halkaas oo ay awoodaan inay booqdaan xeebta Gibraltar oo ay wax ka bartaan qoolleyda badda iyo qoolleyda badda ee dhallaanka iyo sidoo kale daawashada iyaga oo ku soo noqonaya badda.
Sandals Foundations waxay iskaashi la samaysaa CARIBSAVE, Coral Restoration Foundation, iyo bulshada saaxiibtinimo ee Kalluumaysatada Bluefield si ay u dhisaan laba xanaano kooreed oo ku yaal Jamaica oo ku dhex yaal marinnada badda ee Bluefield iyo meesha quduuska ah ee badda ee Boscobel. Si wada jir ah, xarumahan xanaanooyinka kooraska waxay koraan in ka badan 3,000 oo xabbo oo shacaab ah sannadkii. Xanaanada kooraska ee Boscobel ee ay maamusho Sandals Foundation ayaa ilaa hadda beeray in ka badan 700 oo xabo oo shacaab ah.
Daboolista Coral ee Kariibiyaanka ayaa hoos u dhacay ilaa 90%. Xannaanada Coral waxay gacan ka geysataa dib u soo celinta daboolida shacaab iyadoo u koraysa caafimaad leh, koriyaal si degdeg ah u koraya iyo dib ugu beerista dib ugu soo celinta dhismayaasha reef-ka. Tani waxay gacan ka geysataa in la bixiyo deegaan nolosha badda iyo sidoo kale waxay gacan ka geysataa ilaalinta xeebaha nabaad guurka.
Mu'asasada Sandals waxay bilawday mashruuc dhiirigelin hore ah oo cinwaankiisu yahay Project Sprout. Mashruuca waxaa loo abuuray in laga jawaabo baahida waxqabadyada hore ee heerka aasaasiga ah ee nidaamka waxbarashada kaas oo ka hortagaya ama hagaajin doona diyaargarow la'aanta ardayda.
Iyada oo la adeegsanayo waxqabadyada la beegsanayo, tayada macalinka, iyo hagaajinta waxtarka, xirfadaha waalidnimada waa la xoojiyaa iyo waxqabadyada dugsiga ku salaysan ayaa lagu hawlan yahay guriga, kor u qaadaya jawiga waxbarashada. Sprout waxay beegsataa ardayda da'doodu u dhaxayso 3-5 sano waxayna ka hawlgashaa shan dugsi: Leanora Morris Basic, Culloden ECI, Seville Golden Pre-school, King's Primary, iyo Moneague Teachers College Basic.
Dugsiga Dhallaanka ee West End
Sandals Foundation oo ay iskaashanayaan Sanduuqa CHASE ayaa iska kaashaday inay maalgeliyaan dhismaha West End Infant School ee Negril, Westmoreland. Hindisahani waa mid ka dhashay aqoonsiga Sandals Foundation ee baahida loo qabo hay'ad taageerta Waxbarashada Carruurnimada Hore (ECE).
Dhismaha West End Infant School waa mashruuc ay ansixisay Wasaaradda Waxbarashada (MOE) kaas oo ka hadlaya kor u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha, boos ku filan iyo badqabka carruurta fasallada, iyo baahida loo qabo kor u qaadista aqoonta barbaarinta ee macallimiinta gobolka.
Dugsiga dhallaanka ee la dhammeeyey wuxuu siinayaa fursadda carruurta da'doodu u dhaxayso 3-6 gudaha iyo hareeraha beeshaas si ay u helaan waxbarasho carruurnimo oo tayo leh oo ku jirta jawi waxbarasho oo taageero leh.
Marcy MacDonald wuxuu leeyahay,
Nofeembar 13, 2021 at 14: 36
Qoraaga safarka ahaan, waxaan dareemayaa wanaag ku saabsan Sandals-ka inaan ogaanayo dadaalkooda samafal ee bulsho kasta si gaar ah!